Ifayela lami alinakululama. Iyiphi indlela yami yokugcina? - DataNumen
Uma ifayela lakho ligcwele wonke ama-zero uma usebenzisa le ndlela ukuyihlola, khona-ke ayikho idatha engabuyiseka efayeleni lakho. Noma kunjalo, ungesabi. Kusekhona amathuba ukuthola imininingwane yakho, ngokulandelayo:
Idiski / idrayivu lapho kutholakala khona ifayela lakho isengaqukatha idatha etholakalayo. Kwezinye izinhlobo zedatha, njenge-Outlook noma i- Outlook Express idatha, ongayisebenzisa DataNumen Outlook Drive Recovery or DataNumen Outlook Express Drive Recovery ukuskena idiski / idrayivu bese uthola idatha yakho kuyo. Kwezinye izinhlobo zedatha, njenge SQL Server idatha yedatha, ungaqala udale isithombe sediski noma ushayele nge DataNumen Disk Image, bese usebenzisa DataNumen SQL Recovery ukuskena ifayela lesithombe bese uthola idatha yakho.
Noma iyiphi imidiya yediski / yedrayivu noma yesitoreji okopishele kuyo ifayela lakho, noma ifayili lakho ibikade ikhona phambilini, ingaqukatha nemininingwane oyifunayo. Ngakho-ke futhi ungasebenzisa indlela efanayo kusixazululo 1 ukuthola imininingwane yakho.
Ungakwazi futhi Xhumana nathi futhi uchaze yonke inqubo yenhlekelele yedatha yakho ngokuningiliziwe. Sizohlaziya icala lakho ngesandla nangokucophelela ukubona ukuthi asekhona yini amathuba wokuphinda uthole idatha nganoma iyiphi indlela engeyona eyendabuko.
ngale kokululama, disk, disk isithombe, idrayivu, ithemba lokugcina
Ungahlola kanjani ukuthi ngabe ifayili lami liyatholakala yini ngedwa?Ngifuna isici esingatholakali kumkhiqizo wakho. Okufanele ngikwenze?